PSG oo xaqiijineysa in wadahadalada qandaraaska Neymar ay 'ku socdaan wadada saxda ah'
Home Horyaalka France PSG oo xaqiijineysa in wadahadalada qandaraaska Neymar ay ‘ku socdaan wadada saxda...
PSG oo xaqiijineysa in wadahadalada qandaraaska Neymar ay ‘ku socdaan wadada saxda ah’
Xidiga reer brazil iyo kooxda PSG Neymar ayaa si aan macquul aheyn loola xiriirinayey inuu ku laabto kooxdisii hore ee barcelona waxaana xidigaan uu waqtigaan uu rabaa inuu mustaqbalkiisa ciyaareed u hibeeyo kooxda reer France, iyadoo agaasimaha isboortiga Leonardo uu cadeeyay in wadahadalada cusub ee qandaraaska ay yihiin ‘wadada saxda ah’.
Xiddiga reer Brazil ayaa ku jira 18ka bilood ee ugu dambeeya qandaraaska shanta sano ah ee uu saxiixay markii ugu horeysay ee uu PSG kaga soo biiray kooxda Barcelona rikoor caalami ah oo ah 222 milyan euro sanadkii 2017. Laakiin inkasta oo inta badan lala xiriiriyay inuu dib ugu laabto Camp Nou, oo aad u cuslaa sanadkii 2019, wuxuu hadda umuuqdaa inuu kusii nagaan doono caasimada Farance.
Neymar wuxuu ku faraxsan yahay PSG inkasta oo uu ku dhawaaday inuu kooxda isaga tago sanadkii 2019 Waxaan ku soconnaa wadada saxda ah Qandaraaska wali lama saxiixin. Waqti fiican ayaan la nimid isaga. Hadafku waa in sida ugu dhakhsaha badan loo gaaro, ”ayuu Leonardo u sheegay warbaahinta Faransiiska.
PSG ayaa si isku mid ah u daneyneysa inay xirto mustaqbalka Kylian Mbappe, kaasoo xiriir la leh Real Madrid, Angel Di Maria iyo Juan Bernat.
Waxaa lagu soo warramey in xidiga waddankiisa Brazil horaantii bishaan in Neymar uu ku dhow yahay inuu heshiis afar sano ah la galo PSG kaasoo joogitaankiisa Parc des Princes si fiican u noqon doona.
Neymar wuxuu horey ugu sheegay telefishanka Faransiiska TF1: “Waan faraxsanahay maanta. Runtii aad ayaan u faraxsanahay. Waxyaabo badan ayaa isbadalay Si sax ah uma sharixi karo sababta Laakiin maanta waxaan dareemayaa wanaag Waan la qabsaday Waan daganahay waana ku faraxsanahay.
Waxaan rabaa inaan joogo PSG. Waxaan kaloo doonayaa in Kylian Mbappe uu sii joogo Waxaan dooneynaa in PSG ay noqoto koox weyn Waxaan rabaa inaan sii wado kubbadda cagta oo aan faraxsanaado, taasi waa waxa ugu muhiimsan.”
Xaaladda ayaa soo martay muddo dheer laga soo bilaabo 2019 markii Neymar uu isku diyaarinayay inuu dib ula midoobo Lionel Messi oo ku sugan Barcelona waxaana xitaa lagu eedeeyay inuu ‘qalamay’ markii uu ogaaday in tallaabadaasi aysan dhici doonin. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jiray sheegashooyin ah in Barça ‘aysan culeyskooda oo dhan gelinaynin wareejinta’, iyagoo og inaysan haysanin awood ay si dhab ah wax uga qabtaan.
Iyada oo Messi mustaqbalkiisa Barcelona uu ku sii jeedo hawada, waxay u badan tahay inay ku midoobaan Paris marka loo eego kooxda Catalonia oo aan awoodin ineey bixiso qarashaadka ku baxay mushaar ahaan iyo qiimaha lagu heli karo.
Previous articleLigerpool oo xaqiijisay mudada uu garoomada ka maqnaan doono kabtankooda Jordan Handerson.
Next articleArsenal oo ka fiirsaneysa inay u ogolaato Hector Bellerin inuu Kooxda Joogo xagaaga dambe.